Kismaayo News » Qarax ka dhacay Kismaayo
Kn:Qarax ka dhashay miinooyinka dhulka la tiimbiyo ee meelaha durugsan laga qarxiyo ayaa haleelay dad haween u badan oo ku guda jiray barnaamij bilic soo celin ah oo lagu xaab qaadayo qashinka dufuloobay ee daadsan hareeraha jidka laamiga ah ee magaalada dhex mara.
Inta la ogyahay waxaa ku dhintay mid kamid ah haweenkii nadaafadda ku hawlanaa, waxaana ku dhaawacmay 4 kale oo la gaarsiiyay isbitaalka magaalada.
Ciidamada amaanka ayaa markiiba isku gadaamay goobta qaraxu ka dhacay, waxaana xigay hawlgalo ay ka sameeyeen nawaaxiga xaafadaha ku hareeraha ka xiga madasha qaraxu ka dhacay. Hawlgalka waxaa lagu soo qabtay dhawr iyo toban qof, kuwaasi oo ay hadda ku socdaan waraysi iyo qudaadar ku saabsan wixii ay ka ogaayeen falka dhacay.
Waxaa la aaminsanyahay in walaxda qaraxday ay kamid ahayd walxo badan oo Alshabaab ay magaalada ku duugeen ka hor inta ayna ka cagaajin, balse ayna haleelin ciidamada huwantu intii ay miino baarista ka wadeen magaalada.
Qaar kamid ah saraakiisha baaritaanka ku samaynayay goobta qaraxu ka dhacay oo KismaayoNews ay waydiisay in qaraxani uu ahaa mid iskiis u dhacay iyo in meelo kale laga hagayay ayaa noo sheegay in qaraxu uu ku dhacay si qasdi ah oo ay jirtay cid falka ka danbaysay.
Lama garanayo sababta kaliftay in hooyooyin nolol maalmeedkooda ka raadinayay barnaamijka bilic ku soo celinta magaalada lala beegsado qaraxa waxashnimada ah, halka ay ciidamada huwantu magaalada sidii ay doonaan u dhex mushaaxayaan ayagoon la kulmin wax caqabad iyo dhib ah, mise xaaladu waxaa waaye, hadii la iga adkaado anigana cid aan ka adkahay ayaa jirta oo ah Shacabka masaakiinta ah.
Waxaa sidoo kale Bam-gacmeed lagu tuuray askar ka tirsan ciidanka Dawladda oo markaasi hor marayay mukhaayad ku taala Aargada Koobaad, waxaana halkaasi ku geeriyooday qof rayadda ah halka ay ku dhaawacmeen sadex kale oo mid askari yahay labana shacab tahay. Halka Bam-gacmeedka lagu tuurayo waxay kamid tahay meelaha ugu saxmadda badan magaalada, waxaana mararka qaarkood is xiraaya dadka is dhaaf dhaafka dadka soo shaqo tagay iyo kuwa soo sheeko tagay.